Maxaa xigi doona mar hadduu Trump ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan? - BBC News Somali
Image caption Mr Trump ayaa waqtigii uu ku jiray ololihii lagu soo doortay waxa uu aad u dhaleecaynayay heshiiskii Iiraan lala galay 2015-kii
Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu qalinkiisa ku baabi'iyay heshiiska kaliya - ha xumaado amaba ha samaadee - ee Iiraan ka hor istaagi lahaa inay gaarto hammigeeda nukliyeerka.
Waxa uu weerrar culus ku qaaday heshiiska iyo gol daloollada uu leeyahay.
Hasayeeshee ma uusan soo bandhigin siyaasad lagu badelo heshiiska uu ka baxay. Diblumaasiyaddii Mareykanka ayuu ka hor keenay qaar ka mid ah xulafadii ugu dhaweyd Washington.
Dadka qaar ayaa ka cabsi qaba in arrintan ay Bariga Dhexe u horseedi karto dagaal culus oo dhibaato badan reeba.
Heshiiskii nukliyeerka Iiraan lala galay 2015 ee loo yaqaan JCPOA ayaanan qaab ahaan burburin. Hasayeeshee waa ay adag tahay sida uu ku sii jiri karo, oo inuu sii jiro waxa ay ku xiran tahay jawaabta ay Iiraaniyiintu ka bixiyaan.
Image caption Madaxweyne Ruuxaani ayaa waxa uu wajahayaa mucaaradad xooggan oo kaga imanaysa kooxaha mayalka adag ee ka jira gudaha kuwaas oo doonaya in Iiraan ay heshiiska isaga baxdo
Madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa si weyn u taageersanaa heshiiska. Waxa uu u muuqdaa inuu isku dayayo inuu heshiiska la sii wado wadammada reer Yurub iyo wadammada kale ee qeybta ka ahaa.
Hasayeeshee waxa uu wajahayaa mucaaradad xooggan oo kaga imanaysa kooxaha mayalka adag ee ku sugan gudaha dalka, kuwaas oo qaarkooda ay doonayaan inay ka baxdo heshiiska JCPOA.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqda inuu si xun u galay dhiggiisa Iiraan.
Heshiis aan dhameystirnayn balse shaqeynayay
Waxaannu shaki ku jirin in heshiiska nukliyeerka ee Iiraan uu yahay mid muran badan uu ka taagan yahay. Mr Trump waa uu ka soo horjeestay, walow uu u muuqday inuusan sabab cad u hayn oo uu uga baxo oo aan ka ahayn inuu heshiiskan saxiixay ninkii ka horreeyay.
Heshiisku ma dhameystirna oo laguma xusin tallaabooyinka walaaca leh ee ay Iiraaniyiintu ku horumarinayaan barnaamijkooda gantaallada iyo habdhaqankeeda gobolka.
Saddex sababood oo uu Trump ku laalay heshiiskii Iran
Waxaase heshiiska ku jira barnaamijka horumarsan ee nukliyeerka ee Iiraan, oo waxaa xayiraado lagu soo rogay dhaqdhaqaaqyada nukliyeerka ee ay wadday iyo inay marto nidaam lagu faafreebayo oo loogaga dhowrayo inay hubkaasi hesho.
Qaar ka mid ah xayiraadahaasi muddo kaddib waa ay dhacayan. Waxa ugu wanaagsan ee la oran karo ayaa ah in heshiiskan uu Iiraan ka hor istaagay in ay usii dhawaato sameysiga hubkaasi wax baabi'iya.
Xaqiiqda aanan ka daadegin Donald Trump ayaa ah in heshiiska nukliyeerka uu shaqeynayay.
Dhammaan wadammada kale ee heshiiska saxiixay ayaa rumaysan in Iiraan ay ka soo baxday qodobada heshiiska. Sidoo kale waxaa sidaas qaba Hay'adda ka hortagta Hubka Atoomikada.
Wadada halista ah ee inaga horreysa
Dood kulul ayaa haatan ka soconaysa gudaha Tehraan oo ciddii ku guulaysataba laga ogaan karo in heshiiska uu sii jiri doono iyo inkale.
Haddii kooxaha qunyar socodka ah ay guurlaystaan Yurub howl adag ayaa u taal, oo markan lagama hadlayo cunaqabatayn Mareykanku uu ku soo rogo Iiraan ee, waxaa waxaa meesha ku jiri kara cunaqabateynta heerka labaad oo lagu soo rogo shirkadaha ajaanibta ee la shaqeeya Iiraan.
Image caption Madax wareer ba'an: Reer Yurub marka ay timaado arrinta Iiraan miyey haystaan istiraatiijiyad cad oo ku saabsan heshiiska oo ay kagala hortegi karaan Mareykanka?
Reer Yurub si cad ayey uga soo horjeesten go'aanka Madaxweyne Trump, oo waxa ay u muuqdaan inay doonayaan inay heshiiska ku sii dheganaadaan.
Iyadoo Mareykanka, Reer Yurub iyo Nato ay si weyn uga walaacsan yihiin mowqifka adag ee uu Ruushku qaatay, ayaa la iswaydiinayaa in tani ay tahay khilaaf ba'an oo soo wajahay dalalkii xulafada ahaa?
Badiga Dhexana xaalku ma wanaagsana, oo Iiraan iyo Israa'iil waxa ay isku haystaan waxa ka soconaya gudaha Suuriya in halis ay halkaas ka timaadana lama dhayalsan karo.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil, Benjamin Netanyahu ayaa aad ugu ololaynayay in Trump uu isaga baxo heshiiska nukliyeerka.